प्रमिलाले श्रीमानलाई मा’रेर भान्छामा गा’डिन्, त्यहीँमाथि चुलो बनाएर १ महिना खाना पकाइन् – AB Sansar
January 17, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on प्रमिलाले श्रीमानलाई मा’रेर भान्छामा गा’डिन्, त्यहीँमाथि चुलो बनाएर १ महिना खाना पकाइन्
बिहीबार अनुपपुर पुलिसले उनलाई आफ्ना पतिको ह’त्या गरेको आ’रोपमा प’क्राउ गरेको छ । महेश एक महिनादेखि बेपत्ता भएको भन्दै पुलिसले खोजी गरिरहेको थियो । २२ अक्टोबरमा प्रमिलाले पति बेपत्ता भएको भन्दै पुलिसमा रिपोर्ट लेखाएकी थिइन् । पुलिसले बेपत्ता भएकै आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो तर २१ नोभेम्बरमा यो घ’टनामा ट्वीस्ट आयो । मृ’तकका दाजु अर्जुन बैनेवालले पुलिसलाई आफ्नो भाइको घरमा केही संदिग्ध भएको बताए ।अर्जुनका अनुसार उनी कैयौं पटक भाइको घर गए तर उनकी पत्नीले हरेक पटक उनलाई केही न केही बहाना बनाएर टारिन् । त्यसपछि पुलिस एसएचओ भानु प्रताप सिंह आफ्नो टिमका साथ उनको घरमा जाँदा उनीहरुलाई पनि केही दु’र्गन्ध महसुस भयो । जब उनीहरु किचनको नजिक गए दुर्गन्ध झनै बढ्यो । किचनमा दुर्गन्ध आएको ठाउँमा खनेर हेर्दा त्यहाँ मृ’तकको श’व भेटियो ।
श’व भेटिएपछि सोधपुछमा मृ’तककी पत्नी प्रमिलाले आफ्ना पतिको दाजु गंगालाल बैनेवालकी पत्नीसँग अवैध सम्बन्ध भएको बताइन् । यो थाहा पाएपछि प्रमिला र गंगारामले मिलेर उनलाई मार्ने योजना बनाए । प्रमिलाको यो बयानपछि गंगारामले भने आफू ह’त्याको योजनामा सहभागी नभएको दावी गरेका छन् । पुलिसले यो घ’टनामा थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । जीवनभर एकअर्कालाई साथ दिने बाचा कसम खाएर जोडिएको कतिपयको सम्बन्ध बिच बाटोमै आएर तोडिन्छ । एउटै छानोमुनी बस्ने, एउटै ओछ्यानमा सुत्ने, एउटै थालमा खाने भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएका जोडिहरु एकाएक किन टुट्छन् ? आत्मियताको साथ प्रगाढ बनेको सम्बन्धमा कटुता आउनु भ्रम र अविश्वास बढ्नु अन्ततः अलग विषय हुन् । तर सम्बन्धलाई पुनविराम दिने अवस्थामा पुग्न एउटै कारण हुँदैन् । यो बेला दुवैले आफुहरुको सम्बन्धमा केही न केही गल्ती गरेकै हुन्छन् । एक दाम्पत्य जोडी टुट्नु एक दुखद कुरा कुरा हो । यसले श्रीमान श्रीमतीलाई मात्र हैन उनीको सन्तानलाई समेत नराम्रो असर पर्छ । उनीहरुका आफन्त , नातेदार इष्टमित्र छरछिमेकी यस्तो कुराबाट प्रभावित हुन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपतिसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता
“खुशीको खबर: नेपालमै अर्को पे’ट्रोल खानी भेटियो ! उ’त्खनन् रो’क्न भारतको द’बाब ! (भिडियो सहित)
भर्खरै गयो फेरि ५.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प ।(भिडियो सहित हेर्नुहोस
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा१२ को परीक्षा लिने मिति तोक्यो यो मितिमा हुदैछ १२ को परीक्षा